कागतेका किसानलाई प्लाष्टिक टनेल वितरण - SangaloKhabar
धनकुटा । धनकुटा नगरपालिका–३ कागते स्थित मार्गा पात्ले टोलबस्तीका किसानहरुलाई प्लाष्टिक टनेल वितरण गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकुलन नमुना गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत मार्गा पात्ले टोलबस्ती संगठनका ४० परिवारलाई प्लाष्टिक टनेल वितरण गरिएको हो ।
पर्डेप नेपाल धनकुटाको आयोजना तथा धनकुटा नगरपालिका र युएनडीपीको आर्थिक सहयोगमा किसानलाई टनेल प्रदान गरिएको हो । कार्यक्रममा धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङ, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष विकास घिमिरे, टोलबस्ती संगठनका अध्यक्ष मिन बहादुर कार्की लगायतले टनेल वितरण गरेका छन् ।
कार्यक्रममा धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख तामाङले किसानलाई कृषि यन्त्रसहित नयाँ आधुनिकिकरणमा लैजानु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि सामाग्री वितरण गरिएको बताए ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत धनकुटा नगरपालिकाको सिजाली, थिङ ओख्र बरबोटे र ओक्मालुङका २ सय ५५ घर, वडा नं. २ को मुडे चोक्रोकका २ सय ३५ घर र वडा नं. १० को उत्तरपानीका ७० घरलाई प्लाष्टिक टनेल वितरण गरिने पर्डेपका कार्यक्रम संयोजक मिनप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १३, २०७६ समय: १२:२९:५७